Isikhathi: 2018-Aug-17 Okuhamba phambili kwe-:
Singathola impendulo njengalandelayo:
Inkampani iningi iya embukisweni ukuze ibonise umkhiqizo wayo noma umkhiqizo / ubuchwepheshe obusha, singakwazi nokugcina ukubambisana nekhasimende elidala ngokubamema egumbini lokubukisa.
Ngaphambi kokuba siye umkhakha show, kufanele senze uhlelo inkampani yethu, okokuqala kunakho konke, i-Nanti iphuzu eliyisihluthulelo isabelomali. Uma une imali eyanele, ungakwazi ukubhuka isikhala esikhulu. Uma ibhajethi yakho lilinganiselwe, ungakwazi ukubhuka igobolondo I-Scheme bese uyithuthukisa.
Uma usungile ibhuloho, kufanele ukhethe imishini ekahle yombukiso wakho.
Ukuze igobolondo scheme, ungakhetha Modular ukubonisa mkhiqizo, efana octanorm maxima uhlelo, ukudweba kakhudlwana edokodweni lakho, ungase futhi ufake ukuma banner phambi embukisweni idokodo futhi wenze ezinye ukukhuthazwa. Uma ufuna ukubonisa umkhiqizo wakho , ungase ukuthenga ezinye kubakaki eshalofini kanye panel. ukuthola umphumela esiphezulu, ungasebenzisa embukisweni yakho iphaneli ukunamathela poster ezinye ukwethula inkampani yakho futhi umkhiqizo.
Uma ufuna ngokuphindaphindiwe zisebenzisa imishini yakho embukisweni, ungakhetha yembobo umbukiso yokubeka, ezifana pop up ukubonisa yokubeka, banner ukuma futhi ikhanyise ngemuva isibonisi udonga. Bonke ngothi lwabo, ekhanyayo isibonisi zezitsha kukhona ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva, ngenxa yabo esikhanyayo ukubukeka kanye ihluzo kushintshashintsha, ngaphandle zingabantu kalula ukufaka nezokuthutha. ungaphrinta imibono yakho phezu ihluzo, ukuze ongaphakeme izindleko zakho, ungase usebenzise vela ukuma noma banner ukuma.
Ukuze idokodo emikhulu, ungasebenzisa truss isakhiwo ekwakheni, zingabantu engabizi. Khonamanjalo, aluminium truss idokodo kungenziwa yakhelwe beyimiqemane ezahlukene kanye nosayizi. Bangaphinde kusebenzisane zasesiteji ukukulethela ezingeni eliphezulu.
Ngaphambilini: Ungakha kanjani isiteji se-truss?
Okulandelayo: CL Stage Truss kwi-Asian Games 2018